Ahoana ny fanokafana ny sisintany vaovao ny fandoavam-bola Bluetooth | Martech Zone
Saika matahotra ny hisintona fampiharana hafa ny rehetra rehefa misakafo hariva any amin'ny trano fisakafoanana iray.
Satria ny Covid-19 dia nitarika ny filàna famandrihana sy fandoavam-bola tsy misy ifandraisany, nanjary soritr'aretina faharoa ny harerahana amin'ny fampiharana. Ny teknolojia Bluetooth dia natao hanamafisana ireo fifampiraharahana ara-bola ireo amin'ny alàlan'ny famelana ny fandoavam-bola tsy misy fikasihana amin'ny lavitr'ezaka, mampiasa fampiharana efa misy hanaovana izany. Ny fandinihana vao haingana iray dia nanazava ny fomba nanafaingan'ny valan'aretina ny fampiasana ny teknolojia fandoavam-bola nomerika.
Mpanjifa 4 amin'ny 10 any Etazonia no nivadika tamin'ny karatra tsy misy ifandraisany na poketra finday ho fomba fandoavana voalohany hatramin'ny nisian'ny Covid-19.
PaymentsSource sy American Banker
Ahoana anefa no handrefesana ny teknolojia Bluetooth amin'ny fandrosoana amin'ny teknolojia fandoavam-bola tsy misy fifandraisana toy ny kaody QR na fifandraisana akaiky (NFC)?
Tsotra izany: Fanomezana hery ny mpanjifa. Ny maha-lahy na maha-vavy, ny vola miditra ary ny fiaraha-monina dia misy fiantraikany amin'ny fahavononan'ny mpanjifa hampiasa ny teknolojia fandoavam-bola amin'ny finday. Saingy noho ny fahafahan'ny rehetra miditra amin'ny Bluetooth, dia manome fanantenana mampanantena amin'ny fampitomboana ny fomba fandoavam-bola izy io ary mety hahatratra ny mponina samihafa. Toy izao ny fomba fanokafana sisintany vaovao ho an'ny fampidirana ara-bola ny Bluetooth.
Fanamafisana ny fandoavam-bola tsy misy fifandraisana
Ny Covid-19 dia nanova tanteraka ny fihetsiky ny mpanjifa manoloana ny fandoavam-bola tsy misy ifandraisany ho tsy dia mifandray ara-batana amin'ny Points of Sale (pos) lasa tsy maintsy ilaina. Ary tsy misy miverina intsony – ny fanabeazana haingana ny teknolojia fandoavam-bola dizitaly dia eto hijanona.
Andeha horaisintsika ny zava-misy amin'ny tsy fahampian'ny microchips izay efa nisy fiantraikany mafy tamin'ny famatsiana. Midika izany fa hanjavona ny karatra alohan'ny vola ary, ho setrin'izany, dia hisy fiantraikany ratsy amin'ny fidiran'ny olona amin'ny kaonty any amin'ny banky. Noho izany, tena maika ny fanatsarana ny fomba fandoavam-bola alohan'ny hitrangan'izany.
Avy eo, na dia amin'ny cryptocurrency aza dia misy dichotomy hafahafa. Manana sandan'ny vola voatahiry amin'ny nomerika izahay, kanefa mbola mametraka sy mamoaka karatra avokoa ireo fifanakalozana sy poketra crypto rehetra ireo. Ny teknôlôjia ao ambadik'ity vola ity dia nomerika, ka toa tsy takatry ny saina ny tsy fisian'ny fomba fandoavam-bola nomerika. Ny fandaniana ve? Ny fanelingelenana? Sa midina amin'ny tsy fahatokisana?
Raha mitady fomba hametrahana tolotra mpivarotra foana ny andrim-bola iray, dia toa tsy afaka mahazo ny tànany amin'ny terminal izy ireo. Eo no ilana fomba hafa mba hanomezana traikefa tsara amin'ny farany.
Ny teknolojia Bluetooth no manome fahafaham-po, fahafaham-po ary fahaleovan-tena ho an'ny mpivarotra sy ny mpanjifa amin'ny fomba fidiny hifanakalozana sanda. Ny traikefa fisakafoanana na fivarotana rehetra dia azo fehezina satria tsy mila misintona rindranasa samihafa na mijery kaody QR mihitsy aza. Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fifanolanana, ireo traikefa ireo dia lasa mora, mahatafiditra ary mora azon'ny rehetra.
Manerana ireo karazana finday samihafa
Rehefa mandinika ireo tsena vao misondrotra sy ireo vondrom-piarahamonina ara-tsosialy ambany kokoa, dia hita fa voaroaka ara-tantara tao amin'ny andrim-panjakana ara-bola mahazatra izy ireo. Izany dia satria ny teknolojia NFC, toy ny Apple Pay, dia tsy tohanana amin'ny fitaovana rehetra ary tsy ny rehetra no afaka mividy iPhone. Izany dia mametra ny fivoarana ary mitahiry endri-javatra sy serivisy sasany ho an'ny ambaratonga ambony misy fidirana amin'ny elektronika manokana.
Na ny kaody QR toa hita eny rehetra eny aza dia mitaky fakan-tsary avo lenta ary tsy ny finday rehetra no manana an'io fiasa io. Ny kaody QR dia tsy manome vahaolana azo tsapain-tanana fotsiny: Mbola tsy maintsy manakaiky ny kaody iray ny mpanjifa mba hisian'ny fifampiraharahana. Ity dia mety ho taratasy ara-batana na fitaovana izay miasa ho mpanelanelana eo amin'ny mpivarotra, mpivarotra ary mpanjifa.
Amin'ny lafiny iray, nandritra ny roapolo taona lasa izay, ny Bluetooth dia navela tamin'ny finday rehetra, anisan'izany ny fitaovana ambany kalitao. Ary miaraka amin'izay dia tonga ny fahafahana manao fifampiraharahana ara-bola amin'ny Bluetooth, ahafahan'ny mpampiasa mampiasa teknolojia izay tsy tratra teo aloha. Izany dia mitovy amin'ny fanomezan-danja ny mpanjifa satria nesorina tanteraka ny fitaovana ary ny POS sy ny mpanjifan'ny mpivarotra ihany no tafiditra amin'ny fifanakalozana.
Mitondra fahafahana bebe kokoa ho an'ny vehivavy ny Bluetooth
Ny lehilahy dia maneho fahalianana kokoa noho ny vehivavy mampiasa poketra finday ho an'ny aterineto ary ny fividianana any amin'ny magazay fa manodidina ny 60% amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fandoavam-bola dia ataon'ny vehivavy. Eto no misy ny fahatapahan'ny fifandraisana sy ny fahafahana lehibe ho an'ny vehivavy hahatakatra ny herin'ny teknolojia vaovao mipoitra.
Ny famolavolana ny teknolojia fandoavana sy ny UX dia matetika novolavolain'ny lehilahy ary raha jerena ny famoronana harena na cryptocurrency, dia hita fa navela ny vehivavy. Ny fandoavam-bola amin'ny Bluetooth dia manolotra fampidiran-dresaka ho an'ny vehivavy manana traikefa amin'ny fividianana entana mora kokoa, tsy misy korontana ary mora kokoa.
Amin'ny maha-mpanorina ny sehatra teknolojia ara-bola ahafahan'ny traikefa fandoavam-bola tsy misy fikasihana, dia zava-dehibe ny nieritreritra ny vehivavy amin'ny fanapahan-kevitry ny UX, indrindra amin'ny tsena vao misondrotra. Tsapanay ihany koa fa zava-dehibe indrindra ny manakarama vehivavy mpanatanteraka amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ireo tambajotra ao amin'ny indostrian'ny fandoavam-bola toy ny Tambajotra fandoavana vola ho an'ny vehivavy eoropeanina*.
Tao anatin'ny folo taona lasa, saika ny isan-jaton'ny tolotra renivola venture an'ny vehivavy mpanorina avo roa heny. Ary ny sasany amin'ireo fampiharana tsara indrindra misy dia na novolavolain'ny vehivavy na manana vehivavy amin'ny andraikitry ny mpitantana ny fandoavam-bola. Eritrereto ny Bumble, Eventbrite, ary PepTalkHer. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ny vehivavy koa dia tokony ho lohalaharana amin'ny revolisiona Bluetooth.
Ny fandrosoana farany amin'ny Bluetooth dia afaka mifandray amin'ny fampiharana mivantana avy amin'ny fitaovana POS, terminal hardware, na rindrambaiko amin'ny mpivarotra iray. Ny hevitra fa ny fampiharana banky finday efa misy dia azo ampiasaina amin'ny fifampiraharahana amin'ny Bluetooth, miaraka amin'ny toetran'ny Bluetooth hatraiza hatraiza, dia manome fahafahana ho an'ireo avy amin'ny fiaviana ara-tsosialy, lahy sy vavy ary varotra.
Tsidiho ny Bleu
* Fanambarana: Mipetraka eo amin'ny solaitrabe ao Bleu ny filohan'ny EWPN.
Tags: apple payBleuBluetoothfandoavam-bola bluetoothcontactlessny fandoavam-pifandraisanaCovid-19cryptocurrencyfandoavana digitalteknolojia fandoavam-bola nomerikatsenaTambajotra fandoavam-bola ho an'ny vehivavy Eoropeanateknolojia ara-bolafintechfanodinana vola amin'ny findayfandoavam-bola amin'ny findaypoketra findayfifandraisana akaiky eny an-tsahanfcareti-mifindrafanodinana volapaymentsourceposQR Codeuxux fanapahan-kevitra